Ryuko Park | Efitrano fahatsiarovana an'i Ryuko
Momba ny Ryuko Park
Ryuko Park dia mitahiry ny trano taloha sy atelier noforonin'i Ryuko tenany.
Ny trano taloha dia naorina tamin'ny 1948-54 taorian'ny ady, ary ny atelier, izay tafavoaka tamin'ny baomba, dia natsangana tamin'ny 10, faha-1938 taonan'ny nananganana an'i Seiryusha.
Ho fanampin'izany, Ryuko dia namorona ny "Bomb Sanka no Ike" ao amin'ny Ryuko Park ho dobo ho an'ny faritra onenana izay potika tamin'ny fanafihana an'habakabaka tamin'ny faran'ny ady.
Ryuko Park dia hotarihin'ireo mpiasa fahatsiarovana amin'ny andro fanokafana.Ny ora fampahalalana dia 10:00, 11:00, 14:00 intelo isan'andro.
(Mariho tsara fa mihidy ny vavahady ary tsy afaka mahita azy malalaka ianao raha tsy mandritra ny fotoanan'ny torolàlana.)
* Mandritra izany fotoana izany, foanana ny torolàlana miaraka amin'ny fanehoan-kevitra, hozaraina ny fanehoan-kevitra ary hanome fitsidihana maimaimpoana mandritra ny 30 minitra.
Ankasitrahanay ny fahatakaranareo sy ny fiaraha-miasa.
Fanoloran-tena amin'ny famolavolana sy ny fiainana
Azonao atao ny mahita ny fanoloran-tenan'i Ryuko hamolavola, toy ny atamier 60 tatami mat izay manokana momba ny hazavan'ny andro, ary ny lampivato vato izay atambatra amin'ny ambaratonga toy ny dragona manidina avo eny amin'ny lanitra.
Ao anatin'ny atelier
Cobblestones mampifandray ny trano taloha sy ny atelier
Sehatr'ireo fizaran-taona efatra
Ny zavamaniry vanim-potoana toy ny plum, voninkazo serizy ary ravina fararano dia manome loko an'i Ryuko Park.Azonao atao ny manohina ny fijerin'i Ryuko ny zavakanto, izay nolazaina fa "mamboly fitaovana fanaovana sketsa" ao an-jaridaina.
Dobo "Bomb Sanka" amin'ny vanim-potoanan'ny voninkazo serizy
Trano antitra sy tokotanin'ny trano amin'ny vanin-taona ravina fararano